एकसाथ सात हजार कर्मचारी बर्खास्त ! - Naya Patrika
एकसाथ सात हजार कर्मचारी बर्खास्त !
टर्कीमा गतवर्ष सत्ता परिवर्तनको असफल प्रयास गरिएको थियो । यस घटनाको वर्ष दिन पुग्नुअगाडि टर्कीले सात हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको छ । बर्खास्त हुनेमा धेरैजसो प्रहरी छन् भने बर्खास्त हुनेमा मन्त्रालयका कर्मचारी तथा शिक्षाकर्मी पनि निकै छन् । टर्की सरकारको यस कारबाहीलाई न्यायपालिका, प्रहरी र शिक्षासित जोडिएका सरकारी संस्थानमा शुद्धता ल्याउने कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
टर्कीमा गतवर्ष सत्ता परिवर्तनको असफल प्रयासको शनिबार वर्षदिन पुगेको छ । त्यतिखेर केही अनियन्त्रित सैनिकले भवनमा बम आक्रमण गरेका थिए भने आमनागरिकमाथि गोली प्रहार गरेका थिए । सो हिंसामा २ सय ५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो । जनता रातारात सत्तापलटको विपक्ष तथा सरकारको पक्षमा सडकमा उत्रिएपछि सो प्रयास असफल भएको थियो ।
टर्कीका अधिकारीले सो सत्तापलटको असफल प्रयासका लागि मुस्लिम धर्मगुरु फतेउल्ला गुलेनमाथि आरोप लगाएको थियो । जुलाई, २०१६ मा भएको सो असफल विद्रोहमा राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्डोगानलाई सत्ताबाट हटाउने प्रयास गरिएको थियो ।
टर्की सरकारले सत्तापलटमा मुख्य भूमिका निभाएको आरोप लगाए पनि अमेरिकामा बसोवास गर्ने मुस्लिम धर्मगुरु गुलेनले सो सत्तापलटमा आफ्नो कुनै पनि भूमिकालाई अस्वीकार गरेका थिए । त्यतिखेरदेखि नै अमेरिकाले धर्मगुरु गुलेनलाई टर्कीसामु सुपुर्दगी गर्नुपर्ने टर्कीका अधिकारीको मागमा मौनता साध्दै आएको छ ।
हालै भएको ठूलो संख्याका कर्मचारीको बर्खास्तीको आदेश ५ जुनमा दिइएको थियो, जसलाई शुक्रबार मात्र सरकारी गजेटमा प्रकाशित गरिएको थियो । यस आदेशमा बताइएको छ कि बर्खास्त गरिएका कर्मचारीले देशको सुरक्षाविरुद्ध काम गरिरहेका थिए । उनीहरू चरमपन्थी संगठनका सदस्य थिए ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार बर्खास्त गरिएका कर्मचारीमा दुई हजार तीन सय ती प्रहरी अधिकारी, तीन सय दुई विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा तीन सय ४२ सेवा निवृत्त कर्मचारी र सैनिक छन् । सत्तापलटको प्रयासपछि टर्कीले सुरुमै डेढ लाख अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको थियो । र, सेना, प्रहरी र अन्य क्षेत्रबाट गरी ५० हजारभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
टर्की सरकारको भनाइ छ कि देशको सुरक्षाका लागि यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई बर्खास्त नगरी नहुने अवस्था थियो । तर, आलोचकका अनुसार भने राष्ट्रपति एड्रोगान यथार्थमा यस कथित शुद्धीकरणको माध्यमबाट आफ्ना राजनीतिक विरोधीलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा लागिपरेका छन् । इस्तानबुलमा सत्तापलटको वार्षिकीको सम्झना दिलाउने निकै ठुल्ठूला पोस्टर लगाइएका छन्, जसमा सर्वसाधारण जनता सत्तापलटको समर्थक सैनिकको विरोध गरिरहेको देखिन्छ । वार्षिकीको सम्झनामा ¥याली निकाल्ने तयारी छ । जसको अवसरमा राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्डोगानले ठीक त्यही समयमा संसद्लाई सम्बोधित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जतिखेर पछिल्लो वर्ष आक्रमण भएको थियो ।
बिबिसीका मार्क लोवेनका अनुसार एड्रोगान र उनका समर्थक सैनिक विद्रोहमाथिको जितलाई टर्कीको पुनर्जागरणका रूपमा हेरिरहेका छन् । जब कि अन्य कैयौँ मानिस यस्तो मान्न तयार छैनन् ।